बिहे गरेकोे ५६ वर्ष हुँदा पनि झगडा गरेका छैनौ : डा. भोला रिजाल
Homeरोचक / विचित्रबिहे गरेकोे ५६ वर्ष हुँदा पनि झगडा गरेका छैनौ : डा. भोला रिजाल
October 6, 2018 Spnews रोचक / विचित्र, स्वास्थ्य/विशेष Comments Off on बिहे गरेकोे ५६ वर्ष हुँदा पनि झगडा गरेका छैनौ : डा. भोला रिजाल
काठमाडौं । नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा डा. भोला रिजाल नाम कमाएका व्यक्ति हुन्। उनी आफ्नो यो सफलताको श्रेय श्रीमती सरला रिजाललाई दिन्छन्।
विवाह गर्दा सरला बाह्र वर्षकी थिइन् भने भोला रिजाल पन्ध्र वर्षका थिए।
भोला रिजालले विवाह गर्दा एस.एल.सी. को परिक्षा समेत दिएका थिएनन्। विवाह पछि एस.एल.सी. पास गरेर उनी पढ्नको लागि वनारस गए भने सरलाले बुहारीको लागि निकै कडा रहेको घरमा पनि अनुशासनमा रहेर एक असल बुहारी तथा असल श्रीमती बनेर बसीन्।
भोला रिजाल वनारसबाट आइएस्सी पास गरेर उनी पढ्नको लागि फेरी बंगलादेशको ढाका गए। यदि श्रीमतीले साथ नदिएको भए आफूले एस.एल.सी. पनि गर्न नसक्ने उनी बताउँछन्।
डा. भोला रिजाल पढ्नको लागि विदेश गएपछि डेढ वर्षमा मात्र घरमा आउंथे र एक महिना मात्र बसेर फर्किन्थे। त्यो बेलामा खुलेर कुराकानी गर्न पनि नपाइने, विदेशमा गएपछि कुरा गर्नको लागि कुनै पनि माध्यम नभएका कारण आफ्नो लागि ती दिन कष्टपूर्ण भएको सरला बताउँछिन्। सरलाका अनुसार, त्यसरी उनीहरु करिब तेह्र वर्ष बसेका थिए।
चीनलार्इ चुनाैती: भारतले रुससँग किन्दैछ एकैचोटि ८० निशानामा मार हान्नसक्ने क्षेप्यास्त्र
नेपालगञ्ज जाँदै गरेको हायस दुर्घटना : ४ जनाको मृत्यु, १२ घाइते